Ireo sakafo mampihena
Fomba 6 tsotra, mampihena haingana
Rehefa tsy nandaitra mihitsy ny regime narahina mba hampihenan-tena dia andramo indray ireto manaraka ireto :
Jus akondro sy tantely, mampihena kibo
Ity misy zava-pisotro mandoro tavy, indrindra ny tavy eo amin’ny manodidina ny kibo.
Jus mahagaga, 4 andro dia mihena 1 kg !
Zava-pisotro iray mampihena mifototra amin’ny sakamalaho sy kaokaombra no entina aminao anio. Mifototra amin’ny sakamalaho sy kaokaombra izy ity. Ireo tsara ho fantatra
Arakaraky ny faritra itoeran’ny tavy ny fomba hampihenana azy
Araka ny fanadihadiana iray dia azo hitarafana sy hamantarana ny antony mahatonga ny olona iray hatavy ny toerana hiandronan’ny tavy eo aminy. Miankina amin’izay koa ny fomba hanalana ireo tavy.
Fantatrao ve fa misy ny sakafo tsara ampiarahina mba hahatonga azy ireo handoro kaloria sy hampihena haingana kokoa ? Ireto ny santionany amin’izany, ka tsara ho fantatra :
Akoho sy « poivre de Cayenne »
Mitombo 35% ny kaloria lanin’ny vatana raha toa ka ampiana « poivre de Cayenne » kely ny sakafo be proteina. Asio ity karazana episy ity fotsiny ny akoho, 30 minitra mialoha ny hanatonona azy.
Atody sy poavrao
Manetsika ny metabolisma ny atody. Be vitamina C kosa ny poavrao. Raha ampiarahina ireo dia hanome hery ny vatana hiady amin’ny “cortisol”, tsiry mpanentana mampiakatra ny tahan’ny “glycémie” ka mahatonga ny vatana hahatsiaro noana foana.
Poavrao sy ovy
Mahavoky kokoa noho ny vary mena, ny ovy. Ampiarahina amin’ny potasioma izany dia hampifintina haingana. Noho izany dia tsara ny mampiaraka ny ovy amin’ny poavrao.
Trondro « thon » sy sakamalaho :
Manafaingana ny fiasan’ny metabolisma ny sakamalaho sady mahatonga ny vatana handany kaloria be koa. Feno oméga-3 kosa ny trondro « thon » ka mahavoky ela.
Trondro « saumon » sy tongolo gasy
Manampy ny fanorenana hozatra ny trondro « saumon » satria feno proteina sy asidra oméga-3 ao anatiny. Arakaraky ny ananan’ny vatana hozatra betsaka no hahatonga azy handoro kaloria betsaka, na dia tsy manao na inona na inona aza. Raha ampiarahina amin’ny tongolo gasy ity trondro ity dia vao mainka hampihena haingana satria hita tamin’ny fanadihadiana iray fa mampihena ny fihinanana tongolo gasy isan’andro mandritra ny 12 herinandro.